त्यहाँका लाखौं व्यक्तिहरू एन्टी-एजिंग उत्पादनहरू जस्ता यस्तै पैसा खर्च गर्छन् निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड। जे होस् बुढेसकाल एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो, व्यक्तिहरू केवल बुढो देखिन चाहँदैनन्। शुभ समाचार यो हो कि त्यहाँ त्यहाँ धेरै उत्पादनहरू छन् जुन वास्तवमै यसले मद्दत गर्न सक्छ र निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइड ती मध्ये एक हो। यस पोष्टमा, हामी उत्पादनमा केन्द्रित हुनेछौं।
हामी तपाईंलाई यसको बारेमा जानकारीहरू दिनेछौं, यसले कसरी काम गर्दछ, यसको फाइदाहरू, कहाँ यसलाई खरीद गर्ने, र थप सुझावहरू तपाईंलाई यसको अधिक राम्रो बनाउन मद्दत गर्न।
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड भनेको के हो?
त्यसो भए सबैभन्दा आधारभूत प्रश्नबाट सुरू गरौं। ठुलो र जटिल नामको बारे बिर्सनुहोस्। निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड सीएएस 23111-00-4 वास्तवमा भिटामिन बी of को वैकल्पिक रूप हो, अक्सर यसलाई नियासिन भनेर चिनिन्छ। निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइडलाई नाइजेन पनि भनिन्छ वा NR छोटो बनाउन सकिन्छ। एकचोटि शरीरमा ingested, यो रूपान्तरण हुनेछ निकोटीनामाइड एडेनिन डाइनुक्लियोटाइड वा NAD +। एनएडी + मानव शरीरविज्ञान मा एक सबै भन्दा महत्वपूर्ण इन्जाइम हो।
यो खानालाई रूपान्तरण सहित र ऊर्जाको प्रत्येक कोष भित्र भेटिएको रक्षा प्रणाली सुदृढीकरण सहित धेरै प्रमुख जैविक प्रक्रियाहरू ईन्धनको लागि जिम्मेवार छ। क्षतिग्रस्त डीएनए मर्मत गर्नको लागि एन्जाइम पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ र स्वस्थ बुढेसकाललाई बढावा दिन थप सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। शरीर पूरक बिना सजिलैसँग आफ्नै NAD + एन्जाइम उत्पादन गर्न सक्दछ। दुःखको कुरा यो हो कि, जब तपाइँ उमेरको लागि जारी रहनुहुन्छ, शरीरबाट उत्पादित एनएडी + को मात्रा घट्छ।
संक्षेपमा, वयस्कहरूसँग यस महत्त्वपूर्ण एन्जाइमको कम स्तरहरू जवानहरूको तुलनामा हुन्छन्। यो जहाँ पूरक धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निकटिनमाइड राइबोसाइड क्लोराइड पूरकहरूको प्रयोग गरेर NAD + स्तरहरू बृद्धि गर्न, विशेष गरी वयस्कहरूका बीचमा, धेरै अविश्वसनीय फाइदाहरू प्रदान गर्न सक्दछन्।
सबैभन्दा पहिले, एनएडी + को गिरावटको स्तरलाई मधुमेह, अल्जाइमर, मुटुको विफलता, र दृष्टि हराउने लगायत उमेरसँग सम्बन्धित पुरानो रोगसँग तुलना गरिएको छ। त्यहाँ केहि प्रमाणहरू छन् जुन बढ्दो NAD + ले बुढेसकालको लक्षणलाई उल्ट्याउन सक्छ। अन्तमा, निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड सप्लीमेन्टको प्रयोगले तपाईंलाई कान्छो र बढी विश्वस्त देखाउन मात्र मद्दत गर्दैन। यसले तपाईको उमेर अनुसार पुरानो रोगहरूको सम्भावित जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइडले कसरी काम गर्दछ?
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड बनाम नियासिन पूरकको प्राथमिक उद्देश्य भनेको शरीरमा NAD + को स्तर बढाउनु हो। एनआर एक भिटामिन हो जुन हाम्रो सामान्य खानामा धेरै साना ट्रेसहरूमा पाइन्छ। पदार्थ एक पटक इनजेटेड भएपछि, यो सामान्य मेटाबोलिक प्रक्रियाहरू NAD + मा रूपान्तरण हुनेछ। NAD + स्तरहरू बढाउन खोज्ने व्यक्तिहरूको लागि के NR लाई राम्रो विकल्प बनाउँछ भन्ने तथ्य यो हो कि यो अत्यधिक जैवउपलब्ध छ।
हामीले माथि उल्लेख गर्यौं कि NR भिटामिन B3 को एक रूप हो। त्यहाँ दर्जनौं खाद्य स्रोतहरू छन् जुन भिटामिन बी deliver लाई पुर्‍याउन सक्छ। यद्यपि निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइड शरीरमा समाहित हुने दर आहारमा अन्य B3 फारमहरूको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा छिटो छ। यसले मानव शरीरमा NAD + को लागि पूरकको सब भन्दा भरपर्दो र प्रभावकारी मोडहरू बनाउँदछ।
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड लाभ / प्रभाव
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइडका फाइदाहरू केवल NAD + शरीरमा खेल्ने भूमिकाको सम्बन्धमा मात्र हेर्न सकिन्छ।
यो किनभने NR को पूरककरणले NAD + स्तर बढाउछ र फलस्वरूप यस महत्त्वपूर्ण Coenzyme ले निम्नलिखित प्रदान गर्दछ निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड लाभ:
1. स्वस्थ बुढेसकाल
शरीरमा एनएडी + को बृद्धि भएको उत्पादनले केही एन्जाइमहरूको उत्पादनलाई ट्रिगर गर्न सक्दछ जुन स्वस्थ र आकर्षक बुढेसकाल बढाउन मद्दत गर्दछ। पशु अध्ययनहरूमा, कोएन्जाइमले sirtuins भनिने इन्जाइमको उत्पादनलाई ट्रिगर गर्न सफल भयो।
Sirtuins क्लिनिकल अध्ययनको समयमा जीवन र पशु परीक्षण विषयहरूको सामान्य स्वास्थ्य सुधार गर्न देखा पर्‍यो। अन्य अध्ययनहरूले पनि देखाउँदछ कि Sirtuins ले मानवमा तनाव प्रतिरोध बढाउन र क्षतिग्रस्त डीएनए मर्मत गर्न पनि मद्दत गर्दछ।
2. मस्तिष्कमा सेल डिफेन्स मैकेनिज्म सुधार गर्नुहोस्
एनएडी + ले विशेष गरी बुढेसकालको साथ, मस्तिष्क कोषहरूलाई अनियमित पतनबाट पनि बचाउन सक्छ। केही अध्ययनहरूले देखाउँदछ कि NAD + ले PGC-1-alpha भनिने प्रोटीनको उत्पादनलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। अक्सिडेटिभ तनावबाट कोषहरूको रक्षा गर्न प्रोटीन उल्लेखनीय महत्त्वपूर्ण छ। यसले मस्तिष्क कोषहरूमा माइटोकोन्ड्रियल कार्यहरू पनि सुधार र मर्मत गर्दछ, जसले अझ राम्रो संज्ञानात्मक स्वास्थ्यको लागि अग्रसर गर्दछ।
त्यहाँ दर्जनौं अनुसन्धान अध्ययनहरू छन् जुन अक्सिडेटिभ तनाव र अल्जाइमर, पार्किन्सन र अन्य जस्ता आयुसँग सम्बन्धित मस्तिष्क विकारहरूको साथ मस्तिष्क कोशिकामा क्षतिग्रस्त माइटोकन्ड्रियल कार्यहरू जोड्दछन्। यी प्रक्रियाहरु लाई कम गर्न NAD को कार्य लाई को जोखिम लाई कम गर्न सक्छ अल्जाइमरको र अन्य विकृत मस्तिष्क रोगहरू।
यसमा NAD को प्रभावकारिता वास्तवमा धेरै उच्च छ। केही पशु अध्ययनहरुमा जहाँ अल्जाइमरको साथ चूहोंलाई निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइडको उपचार गरियो, मस्तिष्कमा पीजीसी १-अल्फाको स्तर 1० देखि 50०% बीचमा बढ्यो। अध्ययनको अन्त्य सम्म, एनआरको साथ उपचार गरिएको चूहोंले मेमोरीमा आधारित कार्यहरूमा उल्लेखनीय सुधार देखायो।
3. निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड हृदय समस्याहरूको साथ मद्दत गर्न सक्छ
बुढेसकालको साथ मुटुको विफलताको जोखिममा उल्लेखनीय वृद्धि हुन्छ। मुटुको विफलता पनि एक धेरै साधारण मुद्दा हो वास्तवमा यो विश्वव्यापी रूपमा मृत्युको पहिलो एक कारण हो। समग्र हृदय स्वास्थ्य धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ यद्यपि उचित आहार र व्यायाम सहित। तर त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन जोखिम कम गर्न सक्छ। एनएडी + को बढेको उत्पादन यी चीजहरू मध्ये एक हो।
जनावरहरूमा गरिएको परीक्षण अध्ययनले पत्ता लगायो कि एनएडी + को बढेको उत्पादनले बुढ्यौलीले गर्दा रगत धमनीहरूमा सम्भावित खतरनाक परिवर्तनहरूलाई उल्ट्याउन मद्दत गर्‍यो। केहि मानव-आधारित अध्ययनहरूमा, NAD को उच्च स्तरले महाधमनीमा कठोरता घटायो। NAD + लाई सिस्टोलिक रक्तचापको सम्भावित जोखिम कम गर्न पनि रिपोर्ट गरिएको थियो।
यसको सरल अर्थ भनेको निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड हृदय रोगको जोखिम कम गर्न सम्भावित पूरकको रूपमा प्रयोग गर्ने वास्तविक सम्भावना हो। जहाँसम्म, अझै सम्भावितता अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि अतिरिक्त मानवीय अनुसन्धानको आवश्यकता छ।
यी सुविधाहरूको साथसाथै निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइडले पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ तौल घट्नु। यो किनभने NAD को उच्च स्तर को शरीर मा चयापचय दर बढाउन सक्छ। उच्च एनएडी + स्तरले डीएनए क्षति र अक्सिडेटिभ तनावलाई पनि रोक्दछ, दुई कारणहरू जुन क्यान्सरसँग जोडिएको छ। Coenzyme ले स्वस्थ मांसपेशि उमेर बढावा मा पनि राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ।
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड कसरी प्रयोग गर्ने
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड सामान्यतया नाइजेनको रूपमा बेचिन्छ। उत्पादन अनलाईन क्याप्सूलमा बेचिन्छ र मुख प्रयोग गरेर इन्जेस्टेड हुन्छ।
यद्यपि नाइजेन उत्पादनहरूको बहुमतले केवल निकोटिनमाइड राइबोसाइड क्लोराइड समावेश गर्दछ, केहिले पोलिफेनोल वा टेरोस्टिलबेन सहित थप सामग्रीहरू पनि देखाउन सक्छन्। उत्पादकहरूले प्राय: एक निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड खुराक प्रति दिन २ m० mgs र m०० mgs को बीचमा सिफारिस गर्छन्। यो प्रत्येक दिन उत्पादको दुई क्याप्सुल जत्तिकै हो।
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड बनाम निकोटीनामाइड रिबोसाइड (NR)
यी दुई पदार्थ बीचको भिन्नता भनेको यो सूत्र हो। जे होस्, तिनीहरूसँग लगभग समान कार्य गर्ने मेकानिजम छ। दुवै निकोटिनमाइड राइबोसाइड क्लोराइड र निकोटीनामाइड रिबोसाइडको काम शरीरमा NAD + को उत्पादन बढाउनु हो। दुई भिटामिन बी of का वैकल्पिक रूपहरू पनि हुन्।
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड बनाम निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN)
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड बनामको बहस NMN त्यो ठूलो छैन। निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइड जस्तै, नियासिनको व्युत्पन्न हो। दुई पदार्थहरू पनि उनीहरूको काम गर्ने तरिकामा समान छन्। तिनीहरू इन्जेस्टेड हुन्छन् र NAD + मा रूपान्तरण हुन्छन् एक पटक तिनीहरूले मानव शरीर प्रवेश गरे। थप रूपमा, यी दुबै पदार्थहरू राइबोज र निकोटीनामाइडको मिश्रणबाट पनि संश्लेषित हुन्छन्।
कुन फूडहरू निकोटीनामाइड राइबोसाइड समावेश गर्दछ?
धेरै जसो हाम्रो खानामा निकोटिनमाइड रिबोसाइडको मात्रा थोरै हुन्छ। जहाँसम्म, धेरै व्यक्तिको लागि, भिटामिन बी of को भारको साथ औसत आहार निकोटीनामाइड रिबोसाइडको आवश्यक सेवन प्रदान गर्न पर्याप्त हुनुपर्दछ।
यहाँ धेरै खाद्य पदार्थहरू छन् जुन यससँग मद्दत गर्न सक्छ:
दुग्ध दुध- गाईको दूध निकोटिनमाइड रिबोसाइडको एक धेरै संग आउँछ।
माछा- तपाईं माछाबाट एनआर पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। टूना, सार्डिन, र साल्मन सबैको निकोटिनमाइड रिबोसाइडको स्तर एकदम राम्रो हुन्छ।
बियर- अचम्मको कुरा, बियरले तपाईंलाई निकोटीनामाइड रिबोसाइड पूरक गर्न पनि मद्दत गर्दछ। यो किनभने बीयर यसको मुख्य सामग्री मध्ये एक खमीर हो र खमीर NR मा धेरै उच्च जानिन्छ।
चिकन- कुखुराको खानाले तपाईंको शरीरमा NR स्तर पनि बढावा दिन सक्छ। कुखुराको भुँडी, भुनेको, भुटेको, वा स्टीउभले निकोटिनमाइड रिबोसाइडको .9.1 .१ मिलीग्रामसम्म समावेश गर्दछ।
हरियो तरकारीहरु- हरियो सब्जी पनि सल्लाह दिइन्छ। तिनीहरू भिटामिनको भारले भरिएका हुन्छन्, साथै सबै महत्त्वपूर्ण B3 समावेश गर्दछ जुन तपाईंको शरीरमा NAD + को संश्लेषणमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
खमीर - अन्तमा, यदि तपाईं बियरबाट पर्याप्त निकोटीनामाइड रिबोसाइड प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुन्न, सायद तपाईं अलग खमीर खान सक्नुहुन्छ। यीस्ट निकोटिनमाइड रिबोसाइडमा धेरै नै हुन्छ र तपाईंको आहारमा समावेश गर्नुपर्दछ।
के निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड सुरक्षित छ?
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड थोक प्रयोग गर्नका लागि एकदम सुरक्षित पूरक हो तर कुनै उत्पादनहरू जस्तै यसका धेरै सम्भावित साइड इफेक्टहरू छन् जुन तपाईंलाई सचेत हुनुपर्दछ। केही मानवीय अध्ययनहरूमा, परीक्षण विषयहरू १००० मिलीग्राम र निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइडको २००० मिलीग्राम बीचमा दिइन्थ्यो र यसले कुनै हानिकारक प्रभाव देखाउँदैन। अहिले सम्म, निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइडका निर्माताहरूले दिनमा एक दिन २०० mgs र 1000०० mgs उत्पादनको सिफारिस गर्छन्।
यस सुरक्षा रेकर्डको बावजुद, निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइडलाई दिमागमा राख्न केहि साइड इफेक्टहरू हुन सक्छन्। पहिले, केहि व्यक्तिले उत्पाद प्रयोग गरिसकेपछि पनि मतली लाग्ने महसुस भएको छ। अन्य अवस्थामा, निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइडको परिणाम स्वरूप बिरामीहरूलाई थकित र टाउको दुख्ने महसुस भयो। पाचन मुद्दाहरूको अनुभव पेटको अस्वस्थता र पखाला जस्ता अनौंठो पनि होइन।
यद्यपि निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड साइड इफेक्टको व्यक्तित्व एक व्यक्तिबाट अर्कोमा धेरै फरक छ। केही व्यक्तिले यी प्रभावहरू सबैमा पनि अनुभव गर्दैनन्। यदि तपाईं कुनै अन्य औषधीहरूमा हुनुहुन्छ भने, निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइड प्रयोग गर्नु अघि पहिले आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड अनलाइन किन्नुहोस्
यदि तपाईंलाई निकोटीनामाइड रिबोसाइड क्लोराइडले तपाईंको समग्र स्वास्थ्यको लागि केहि आश्चर्यजनक फाइदाहरू प्रदान गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ भने, त्यसोभए तपाईंलाई खुसी लाग्नेछ कि उत्पादन धेरै स्टोरहरूमा उपलब्ध छ। तपाईं अनलाइन वा अफलाइन पनि किन्न सक्नुहुनेछ। निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड ठूलो मात्रामा नियासिनको रूपमा बेचिन्छ। यो क्याप्सुलमा पनि आउँछ।
जे होस्, तपाईले आफ्नो समय खरिदकर्ताको खोजीमा लिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि त्यहाँ धेरै विक्रेताहरु छन् जसले तपाईंलाई एक गुणस्तरीय उत्पादन प्रदान गर्दैछन्, त्यहाँ अझै धेरै संख्यामा नक्कली साइटहरू छन् जुन केवल तपाईंलाई स्क्याम गर्न चाहन्छ।
यहाँ केही सुझावहरू छन् जुन तपाईंलाई वास्तविक विक्रेताहरू फेला पार्न मद्दत गर्दछ:
समीक्षा जाँच गर्नुहोस्। यो खरीद गर्नका लागि अन्य ग्राहकहरूले के भनिरहेका छन् भनेर जान्न यो सँधै राम्रो विचार हो।
मूल्यहरु पनि जाँच गर्नुहोस्। यद्यपि निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड खरीद गर्नुहोस् धेरै महँगो छैन, यो सस्तो पनि छैन। अनुचित उचित मूल्यमा उत्पाद बेच्न विक्रेताहरूलाई वेवास्ता गर्नुपर्छ।
प्रत्यक्ष सिफारिसको लागि सोध्नु राम्रो विचार हुन सक्छ। केवल अनलाइन उफ्रिने र निकोोटिनमाइड रिबोसाइड क्लोराइड सप्लीमेन्टहरू फेला पार्न कोसिस गर्नुको सट्टा, कसैसँग कुरा गर्नुहोस् जसले यी उत्पादनहरू पहिले खरिद गरिसकेका छन र तिनीहरू तपाईंलाई एक वास्तविक विक्रेतासँग सम्पर्कमा राख्न सक्छन् कि भनेर हेर्नुहोस्। डाक्टरहरूले पनि कहाँ सुरु गर्ने भन्ने बारे केही विचारहरू र निकोटिनमाइड राइबोसाइड क्लोराइड बनाम अधिक जानकारी हुन सक्छ NADH.
निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड एक धेरै लोकप्रिय एंटी-एजिंग पूरक हो। यसले बुढेसकालको स signs्केतहरूलाई उल्टाउन र सही स्वास्थ्यमा राख्न मद्दत गर्दछ। माथिको गाईडले तपाईंलाई त्यहाँ वास्तविक उत्पादन फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
२. निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड के हो?
२. निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइडले कसरी काम गर्छ?
N.निकोटिनमाइड राइबोसाइड क्लोराइड लाभ / प्रभाव
Nic. कसरी निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड प्रयोग गर्ने
N.निकोटिनमाइड राइबोसाइड क्लोराइड बनाम निकोटीनामाइड रिबोसाइड (NR)
N.निकोटिनमाइड राइबोसाइड क्लोराइड बनाम निकोटीनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN）
W. कुन फूडमा निकोटिनमाइड रिबोसाइड हुन्छ?
I.It निकोटीनामाइड राइबोसाइड क्लोराइड सुरक्षित छ?
9.Nicotinamide Riboside क्लोराइड अनलाइन किन्नुहोस्